ညှိနှိုင်းဆဲစီမံကိန်းများနှင့် အဆိုပြုထားသည့် စီမံကိန်းများ - Department of Technology Promotion and Coordination (DTPC)
ညှိနှိုင်းဆဲစီမံကိန်းများနှင့် အဆိုပြုထားသည့် စီမံကိန်းများ
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Center of the International Cooperation for Computerization – CICC နှင့် စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနတို့အကြား The Project for Development of National Spatial Data Infrastructure Pilot System in Myanmar လုပ်ငန်းစီမံချက်သည် Grant Aid အကူအညီအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စီမံချက်ငွေပမာဏမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၂.၀၄၅)သန်း ဖြစ်ပါသည်။ NSDI စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ စီမံကိန်းဖြစ်မြောက် အကောင်အထည်ပေါ်လာ စေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ (Official Development Assistance-ODA) ရယူ၍ Center of the International Cooperation for Computerization(CICC) အဖွဲ့အစည်း၏ နည်းပညာ ပံ့ပိုးမှုများဖြင့် NSDI တည်ဆောက် အသုံးပြုနိုင်ရေး စီမံကိန်းအားအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI) တို့အကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိပါသည်။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးမှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ် များပါဝင်သည့် NSDI စီမံကိန်းအကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် NSDI စီမံကိန်းအကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ အစည်း အဝေးများကို ၂၀၁၅ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (၄) ကြိမ်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ NSDI စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအထောက်အကူပြု ကျွမ်းကျင်သူ စေလွှတ်ရေး အစီအစဉ်အရ ယင်းအစည်းအဝေးများသို့ Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစေလွှတ်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အတွေ့အကြုံများ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(၁) Surrey Satellite Technology Ltd; (SSTL) နှင့် UK မှ Myanmar Space Program လုပ်ငန်းစီမံချက်ငွေပမာဏမှာစတာလင်ပေါင် (၃၇.၄၅)သန်းဖြစ်ပြီး Grant သို့အဟုတ် Loan ဖြင့် စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆဲဖြစ်ပါသည်။
(၂) TEIN၊ O3b Network နှင့် Myanmar First Satellite Corporation သည် O3b Satellite Network အားအသုံးပြု၍ ဟောင်ကောင် သို့မဟုတ် စင်ကာပူရှိ TEIN Network နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိတက္ကသိုလ်များအား ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရေး စီမံကိန်း (Myanmar Research and Education Network – mmREN) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းဆဲဖြစ်ပါသည်။
Negotiated Projects to be implemented
The Project for Development of National Spatial Data Infrastructure Pilot System in Myanmar between Department of Technology Promotion and Coordination and Center of the International Cooperation for Computerization – CICC, Japan isakind of Grant Aid Project to be implemented with the budget amount, (12.045) millions. With the help and Technical Assistance of CICC, Ministry of Science and Technology, the Republic of the Union of Myanmar is negotiating with the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan to get Japanese Government Official Development Assistance (ODA). BeingaFocal Ministry, Ministry of Science and Technology had set up NSDI Project Implementation Committee on 7th October 2015 by the cabinet mandate including Union Minister asachair and Director Generals from corresponding Ministries and Responsible persons from Organizations as members. After that, Project Implementation Committee Meetings were held Four times during 2015 Fiscal Year. In those meetings Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) experts were dispatched and explained NSDI experiences of Japan as per NSDI Implementation experts dispatch program.
(1) With the amount of Project Money, (37.45) millions sterling pound, Surrey Satellite Technology Ltd; (SSTL) and Myanmar Space Program from UK isaproposed and negotiating project with Grant or Loan.
(2) TEIN၊ O3b Network and Myanmar First Satellite Corporation are negotiating to connect Research Education Network (REN) all over universities in Myanmar by using O3b satellite network from Hongkong or Singapore TEIN Network.
Total Hits : 361147